कुनाथरीमा बलेको कृषिको दियो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कृषि विकासले मात्र हाम्रो समृद्धिको दूरदृष्टि पूरा हुन्छ भन्नेमा कुनाथरीका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबै स्पष्ट छन् ।
मंसिर २४, २०७५ कृष्णप्रसाद पौडेल
काठमाडौँ — भारतीय प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टेगोरले अस्ताउँदै गरेको सूर्य र उज्यालो छर्ने दियोबारे मार्मिक कविता लेखेका छन् :
डुबते सुरज ने कहा.
मेरा काम सम्हालेगा कौन ?
सम्पूर्ण जगथानिर उत्तर मौन ।
एक मिट्टी के दिये ने कहा झुकाकर माथ
जितना बनेगा करुंगा नाथ ।
अस्ताउँदो सूर्यले जगलाई सोध्यो म त अस्ताउँदै छु तिमीलाई उज्यालो कसले देला ? यस्तो प्रश्न सुनेर जग मौन थियो । एउटा माटाको दियोले झुकेर भन्यो— मलाई जिम्मा दिनुस् जति सक्छु, गर्छु । सुर्खेतको बड्डीचौर, कुनाथरीका कुनाकुना चहार्दा यो कविता सम्झिँदै उद्वेलित भइरहें ।
बराहताल गाउँपालिकाको कुनाथरी गाउँमा रहेको जनज्योति माविका प्रध्यानाध्यापक नारायण सिग्देलले माटाको दियोले जस्तै काम गरेर गरे के हुँदैन भन्ने बलियो प्रमाण पस्केका छन् । २९ वर्षदेखि अध्यापन गरिरहेका सिग्देल सरले रोजगारी र शिक्षालाई सँगसँगै जोडेका छन् । भविष्यका स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर किसान तयार पार्नेे अभियानमा जुटेका छन् ।
विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षक र अभिभावकलाई १२ बजेको घडीको सुई एकै ठाउँ भएजस्तै गरेर राख्न सक्नु उनको सफलताको कडी हो । यस विद्यालयमा कृषि पढ्ने ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थीबाट सिक्न सकिने मुख्य कुरा भनेकै किसान हुनु ग्लानि हैन गर्वको विषय यो ।
आफ्ना बाआमाले कस्तो दु:खले आफूलाई पढ्न पठाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा खेतीको काम गर्न थालेपछि मात्र थाहा भएको नुवाकोटका सृजना श्रेष्ठ र गोरखाका विनिता भण्डारीले यहीँ पढ्दा बुझे । कृषिकर्ममै फर्किनेमा पक्का छन् उनीहरू । योभन्दा ठूलो अनुभव जन्य सिकाइको मर्म के होला ?
‘पातमा पानी हालेर हँुदैन जरामा हाल्नुपर्छ,’ नारायण गुरुले साना कक्षाका विद्यार्थीको सिकाइमा पनि जोड दिए । यो विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थी खेतीपाती गर्न रमाएका छन् । एक कक्षामा पढ्ने गाउँका नानीहरूले घरमा लगाएको तरकारीका नामहरू फरर भनेको सुन्दा होस् या चार–पाँच कक्षा पढ्ने भाइबहिनीले आफूले लगाएको काउलीमा पानी हाल्दै गरेको हेर्दा होस् यसको मर्म देखिन्छ ।
यो देख्दा पोहोर काठमाडौंको एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने सानो विद्यार्थीले शैक्षिक भ्रमणका क्रममा उपत्याकाबाहिर जाँदा बोटमा केरा फलेको देखेर त्यो रूखमा केरा किन राखेको हो भनेर आफ्नै शिक्षकलाई सोधेको प्रसंग याद आइरह्यो ।
यी गुरु कृषि सपार्न मात्र हैन सामाजिक विभेद हटाउनसमेत लागेका छन् । उनी यस विद्यालयमा पहिलो पटक आउँदा विद्यालयमा छोइछिटो गर्ने चलन थियो । ‘विद्यालय आएको केही दिनमै जनै लगाएको म
बाहुनले दलित विद्यार्थीसँग बसेर खाजा खाएपछि यो विभेद अन्त्य भयो,’ उनले सुनाए ।
विद्यालयमा पठनपाठनका लागि उनले सबै पक्षमा ध्यान पुर्‍याएका छन् । महिनावारी हुने नानीहरूका लागि विद्यालयमै प्याड राखिएको छ । उनीहरूका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्थासमेत छ । शौचालयका पिसाब संकलन गरी खेतीपातीमा मलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
कृषि विकासले मात्र हाम्रो समृद्धिको दूरदृष्टि पूरा हुन्छ भन्नेमा कुनाथरीका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबै स्पष्ट छन् । नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार कृषि विकास हो । पुनरुत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरी यसलाई उन्नत बनाउन नसक्ने हो भने हाम्रो जीविका सुरक्षित छैन ।
कुनाथरीका खेतबारीमा आफैं खेतीपाती, बस्तुभाउ, माछा र मौरीपालन गरेर यो कुराको पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् उनीहरू । नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा एटीएम कार्ड भनेर चिनिने बाख्रा, कुखुरा या तरकारी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँ विद्यार्थीका पचासौं परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसले खानेकुराका साथै आम्दानी र रोजगारीका लागि कृषि भन्ने मर्म आत्मसात् गरिएको देखिन्छ ।
‘गर्नेलाई चाहना भए पुग्छ, बहाना त नगर्नेले बनाउँछ,’ नारायण गुरु विद्यालय र आफूले गरेको खेतीपातीप्रति गर्व गर्छन्, ‘अरूले पढ्न पैसा तिर्छन् । यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू पैसा कमाएर घर पठाउँछन् ।’ यस अभियानबाट उत्साहित नवलपुरका उमाकान्त भुसालले सुनाए, यस्तो गर्न सके पो । देश नेताका गफले मात्र के बन्ला र ?
परिसरभित्रै बैंकिङ सेवा राखेर विद्यालयले विद्यार्थीले कमाएका पैसा घर पठाउन थप सहज बनाएको छ । गाउँलेहरूले विप्रेषणको रकम लिने र बचेका पैसा राख्ने त छँदैछ । सानाकिसानले सामान्य ऋण सहुलियत नपाएर खेती गर्न नसकेको अवस्थामा, एउटा विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई ऋण दिएर कृषिप्रति उत्साहित बनाउने यो कदम प्रशंसनीय छ । अहिलेसम्म विद्यालयले १० लाख लगानी गरेको छ ।
विद्यालयको पढाइ व्यवस्थित गर्न टोल शिक्षा समिति बनाइएका छन् । गाउँमा गल्ने तथा नगल्ने फोहोर खासगरी प्लास्टिकको व्यवस्थापन गरिएको छ । गाउँको सालघारी र सुनद्धारी टोलमा पाहुनाघर सञ्चालनमा आएको छ । पाहुनाघर सञ्चालन गर्नेे गाउँलेका सरल व्यवहारले कुनाथरीको सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य झल्काउँछ ।
हाम्रो कृषि अहिले इतिहासमै सबैभन्दा बढी कमजोर छ । किसानले एक्लै थेग्न नसकेर खेतीपाती कमजोर हुँदै गएको हो । राज्यले कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिलेभन्दा फराकिलो नबनाई यसको विकास सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा सम्भावनाको खोजी गर्न सफल देखिन्छन् नारायण गुरु । गरे के हुँदैन भन्ने उदाहरण हुन् उनी ।
हाम्रो परम्परागत खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउँदै लैजाने, खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुने र तुलनात्मक लाभका कृषिउपजको व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्ने कुराको विकल्प छैन । यो कुरा आत्मसात् गरेर हाम्रो कृषि दोस्रो पुस्तामा बुझाउने बलियो विकल्प प्रस्तुत गर्ने कुनाथरीको जनज्योति विद्यालय बधाइको पात्र हो ।
केही पहिले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कृषि क्याम्पस रामपुरको फेरो मारेको थिएँ । परिसरभित्रका वनमारा झारले आफैंलाई गिज्याएझैं लागिरह्यो । योसँगै केही वर्षअघि स्थापना भएको कृषि वन विश्वविद्यालय र त्रिविविअन्तर्गतका कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानहरूले जनज्योति विद्यालयले गरे जति मात्र पनि कृषिकर्म गर्न विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गरेको भए यो देशको कृषिको कायापलट भइसकेको हुने थियो ।
परदेसिन बाध्य युवालाई नेपालमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर जुटाउन कृषिको रूपान्तरण एउटा बलियो विकल्प बन्न सक्छ । यसका लागि कुनाथरीको सफलताबाट सिक्न सकिन्छ । प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०८:०३
दुई पोखरीको स्वरूप फेरिँदै
मंसिर २४, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
भक्तपुर — मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले ऐतिहासिक दुई पोखरी संरक्षण तथा पुनर्निर्माण थालेको छ । संरक्षण अभावमा पानी सुकेर वर्षौंदेखि चौरको रूपमा परिणत दुई पोखरी संरक्षणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए ।
दुई पोखरी संरक्षणका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । पोखरी संरक्षणका गर्न स्थानीय नीरञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
आकाशेपानीलाई प्रशोधन गरी मध्यपुर थिमि–४ को ऐतिहासिक दुई पोखरीमा पानी भर्ने प्रस्तावअनुरूप पुनर्निर्माण सुरु भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले बताए । मध्यपुर थिमि इनाय टोलको राजगणेशदेखि दिगु भैरवसम्मको पानी जम्मा गरी प्रशोधन गरेपछि मात्र पोखरीमा खसाल्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
दुई पोखरी संरक्षण पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकाले करिब १५ करोडको लागत इस्टिमेट तयार गरेको छ । तीन वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने गरी पैदलमार्ग निर्माण, ८ वटा फल्चा (पाटी) निर्माण गर्नुका साथै नगरको मुख्य सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा दुई पोखरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
हाल पोखरी वरिपरि ६ वटा फल्चा अवस्थित छ । करिब ३ सय वर्ष पहिले गंगा महारानीले दुई पोखरी स्थापना गरी मध्यपुर थिमिवासीलाई पानीको स्रोत दिएको भन्ने कथन छ । कुनै भवितव्य होस् अथवा सिँचाइ, जुनसुकै प्रयोजनका लागि पोखरीकै पानी प्रयोग गर्ने चलन थियो ।
बढ्दो सहरीकरण तथा पानीका वैकल्पिक स्रोत प्रयोग हुन थालेपछि पोखरी संरक्षणमा ध्यान जान छाडेको संस्कृतिविद्हरू बताउँछन् । दुई पोखरीमा बोडेको कमलपोखरी र याता पोखरीबाट पानी ल्याउने गरिन्थ्यो । बढ्दो जनघनत्व र सहरीकरणका कारण पोखरीसम्म ल्याउने पानी बीच बाटोमै टुटेपछि पोखरीमा पानी सुकेको हो ।
२०१५ सालमा राजा महेन्द्र भक्तपुर आउँदा दुई पोखरीको पानी हटाएर मैदान बनाई राजालाई स्वागत गरेदेखि नै पोखरीको पानी सुक्न थालेको स्थानीय उत्तरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । बेलाबेलामा पोखरी संरक्षण गर्ने प्रयास गरे पनि पोखरीको संरक्षण हुन सकेको छैन ।
‘गाविस हुँदासम्म पोखरीमा पानी थियो, नगरपालिका भएदेखि कसैको ध्यान गएन,’ स्थानीय गणेशनारायण श्रेष्ठले भने, ‘मध्यपुर थिमि नगरपालिका भएपछि वास्ता गर्न छाड्यो र पोखरी मासियो, पहिले सबै काम पोखरीकै पानीले गरिन्थ्यो, अहिले सुक्यो ।’ ०६५ मा नगरपालिकाले १० लाखको लगानीमा बार लगाएर संरक्षण प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ।
मध्यपुरवासीले दुई पोखरी सुधार समिति नै गठन गरी पटक/पटक संरक्षण प्रयास गर्दै आएका छन् । मध्यपुर थिमि बालुवाको थुम्कोका रूपमा पनि चिनिन्छ । बालुवा भएको ठाउँमा पानी जोगाउन मुस्किल हुने स्थानीय बताउँछन् ।
पोखरीमा पानी बचाउन पहिलेकै मुहान पत्ता लगाउनुपर्ने र नगरपालिकाले पोखरीको पूर्ण संरक्षण गर्न एकमुष्ट रकम छुट्याउन आवश्यक रहेको स्थानीयको सुझाव छ । मध्यपुर थिमि–१२ याता क्षेत्रमा करिब २० वटा इनार छन् । इनारहरूको मुख्य स्रोत पनि दुई पोखरी नै भएको स्थानीय एवं दुई पोखरी अनुगमन समिति संयोजक बालकृष्ण पात्य श्रेष्ठले बताए ।
पोखरीमा पानी सुक्न थालेपछि इनारमा पनि पानी सुक्दै गएको छ । नगरपालिकाले दुई पोखरी क्षेत्रलाई सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र नगरको प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्कृतिको प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । इनायटोलदेखि दिगु भैरव मन्दिरसम्म पैदलमार्ग निर्माण गरी ठूला सवारी निषेध गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०७:५२